Archive du 20171120
EKAR Maria Mpanampy Soanierana Sempotry ny lakrimozenina ny iray Fiangonana
Nibosesika namonjy varavarana nanavotr’aina hivoaka ny fiangonana ny kristianina vokatry ny fofona manempotra tao am-piangonana. Ireo tonga hamonjy lamesa tamin’ny 9ora sy sasany ao amin’ny EKAR Maria Mpanampy Soanierana-Antananarivo no lasibatry ny fofona lakrimôzenina ity.
Fanambaran’ny Parlemanta Eoropeanina Felaka tehamaina ho an’ny fitondrana HVM
Henjana ny fehin-kevitra navoakan’ny Parlemantera Eoropeanina momba an’i Madagasikara, izay toa vely kanonta goavana miantefa amin’ny fanjakana HVM.
Fifidianana filoham-pirenena Nodinihina maika teny Iavoloha
Notanterahana teny Iavoloha omaly alahady tolakandro ny filankevitry ny minisitra manokana, nanaovana ny vakiteny voalohany momba ny volavolan-dalàna fehizoro ho amin’ny fifidianana filoham-pirenena. Io teboka tokana io no nodinihana omaly, tsy nisy lahadinika hafa.
Mpanao politika Malagasy Any ambanivohitra no tena misy ny herin’izy ireo
Any ambanivohitra no tena misy ny herin’ireo mpanao politika eto amintsika, hoy ny Ben’ny tanànan’ny kaominina ambanivohitra Berivotra, distrikan’i Maevatanana, Faritra Betsiboka Rakotomalala Voahanginirina.
Raharaha Soanierana Ivongo Mampiady an-trano ny MAPAR
Mitohy ary lasa miitatra amin’ny sehatra hafa ny raharaha fifamalian’ny samy depiote tany Soanierana Ivongo, herinandro lasa izay dia ny depiote Rahasimanana Paul Bert na i Rossy voafidy teto Antananarivo faha-4 sy i Tody Arnaud voafidy tao Soanierana Ivongo.
Tovolahy mirijarija, tanora herotrerony Malagasy fiaviana, izay no endrika ivelany. Fa toa hafahafa fihetsika, midongidongy ny fiteniny Tovolahy niova famindra, mahamenatra ny reniny.
Fizahana Taksi maimaipoana Mety hiitatra hatramin’ny taona 2018
Mitohy hatrany ny fifampiresahana eo anivon’ireo mpitatitra sy ny kaominina Antananarivo (CUA) ary ny Omavet mba hanatsarana ny tontolon’ny fitaterana eto Antananarivo Renivohitra.
Fanondranana vehivavy any Sina Lehilahy iray voasambotra teny Ambohimirary
Ny alarobia 15 novambra teo dia nisy olona tonga nametraka fitoriana tao amin’ny polisy noho ny fanondranana ankizivavy Malagasy mankany Sina, raha ny vaovao voaray avy eo anivon’ny polisim-pirenena.
Kaominina Mahitsy RN4 Tsy milamina ny fitantanana ny tsena
Mangata-panazavana mikasika ny fitantanana ny tsenan’ny kaominina ao Mahitsy ny mpivarotra ara-dalàna mpampiasa io toerana io noho ny tsy fahatomombanan’ny fotodrafitrasa rehetra ao.
Taorian’ny pesta Manavao ny tolotra omeny ireo tranombarotra samihafa
Taorian'ny fiatoana naharitra roa volana, noho ny fihanaky ny valanaretina pesta dia efa miverina tsikelikely ny tolotra miavaka atolotry ny orinasa samihafa eto Madagasikara. Tsy diso anjara amin'izany ny Baolai izay ao anatin'ny fankalazan'ny faha-20 taona niorenany.
Beparasy Moramanga Tafakatra 3000 ariary ny kilaon’ny vary
Mitaraina mafy ny mponina any amin’ny kaominina ambanivohitra Beparasy any amin’ny distrikan’i Moramanga Faritra Alaotra Mangoro fa tafakatra hatrany amin’ny 3000 ariary ny kilaon’ny vary tsy an-kanavaka tonga eny an-tsena sy toeram-pivarotana any an-toerana.
Varika eto Madagasikara Ahiana ho ringana afaka 20 taona
113 no karazan-gidro Varika misy eto amintsika, izany hoe mamaritra ny 20% ny karazan-gidro misy eto amin’izao tontolo izao kanefa 0,4% amin’ny velaran-tanin’izao tontolo izao no velaran-tanintsika,
Tovolahy nandoro ny fitsarana Toamasina Voaheloka higadra 5 taona
Ny alakamisy 16 novambra teo no niakatra fitsarana tao Toamasina ilay raharaha fandoroana ny efitranom-pitsaran’ny fitsarana tao Toamasina nitranga ny 5 septambra lasa teo.
Rugby à XV – Kianjan’i Makis Montsan’ny Ftm sy Savony ry Ikopa sy Vtma
Nitohy indray ireo lalao karakarain’ny ny “Comité Technique Fédéral ” misahana ny fifaninana eto Analamanga tontosaina eny amin’ny kianjan’i Makis eny Andohatapenaka taorian’ireny fandrarana ny hetsika ara-panatanjahantena noho ny valan’aretina pesta ireny.
Tsipy kanetibe “Tournoi Cbt” Lasan’i Roger Bloda sy Rindra ny 2.000.000 ariary
Lasan’i Roger sy Rindra ny amboara lehibe sy ny lelavola 2.000.000 ariary niaraka taminy teo amin’ny fifaninanana Tsipy kanetibe “Tournoi Cbt”
Filohan’ny FIFA Niarahaba manokana ny CNaPS Sport
Noho ny fahazoan’ny ekipan’ny CNaPS Sport Madagasikara fanin-diminy nisesy ny anaram-boninahitra Tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny taranja baolina kitra ary fanineniny hatramin’izay niforonany dia nandefa taratasy fiarahabana an’ity klioba ity avy eny Zurich any Suisse ka nalefany nivantana tany amin’ny filohan’ny FMF am-perinasa,
Hotsipahana am-bavafo !
Mibaribary ny tsy fankatoavan’ny sehatra iraisam-pirenena ny fihetsiky ny fanjakana HVM izay efa mananika ny faha-4 taona nitantanana an’i Madagasikara.
Marary saina mitombo isa isan'andro Taratry ny fahantrana, hoy i Gerard Ramamimampionona
Mitombo isa hatrany ireo olona marary saina na adala tazana miriaria eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny. Ho an’ny eto an-drenivohitra manokana dia maro izy ireny ary tsy hanavahana intsony na tanora na olon-dehibe.
Mpianatra afaka BACC mendrika indrindra Hotohanan’ny Airtel ny fidirana eny amin’ny oniversite
Mba hananan’ireo tanora Malagasy ilay toe-tsaina tia miezaka sy mikaroka mandrakariva dia notoloran’ny orinasam-pifandraisana Airtel fanomezana manokana ireo mpianatra 82 mianadahy mendrika indrindra tamin’ny fanadinana Bakalôrea farany teo.
Kopi Kole 2017 Norombahan’i Miora ny fandresena
Nikatona tanteraka omaly alahady 19 novambra 2017 ny fifaninanana kopi kole nokarakarain’ny fahitalavitra TV Plus Madagasikara. Norombahan’i Miora, kopi kole Tahiry avy eto Antananarivo ny loka lehibe.